AbaMongameli base-US bama-1990 kunye nama-2000 (iNombolo 41 ukuya ku-44)
Iinkcukacha Eziqinileyo NgoMongameli 41-44
Mhlawumbi ukhumbule iMfazwe yaseGulf yokuqala, ukufa kukaDiana kunye mhlawumbi nokuba ngumnxeba weTonya Harding, kodwa ngaba uyakhumbula ukuba ngubani owayengumongameli kuma-1990? Kuthe malunga nama-2000? AbaMongameli 42 ukuya ku-44 babengumongameli bamabini amabini, bebonke bahamba malunga neyesibini kunye nesigqi seshumi. Cinga nje oko kwenzekayo ngelo xesha. Ukujonga nje ngokukhawuleza kwimimiselo yooMongameli 41 ukuya ku-44 ubuyisela iimbali ezininzi ezibalulekileyo zento esele ibonakale ngathi yimbali-nje yakutshanje.
UGeorge HW Bush : "Uphakamileyo" uBush wayengumongameli ngexesha leMfazwe yasePersian Gulf yokuqala, ukuThuthwa kweMali yokuThengisa kunye neNgxowa-mali kunye ne-Exxon Valdez i-oil spill. Kwakhona naye kwiNdlu eNtshonalanga yokuSebenziselwa nje isizathu, eyaziwa ngokuba yi-Invasion ye-Panama (kunye nokutsalwa kukaManuel Noriega). UMthetho waseMelika okhubazekileyo wenziwa ngexesha lokuhlala kwakhe, kwaye wajoyina sonke xa eshumayela ngokuwa kweSoviet Union.
UBill Clinton : UClinton wayekhonza njengomongameli ngexesha lama-1990. Wayengumongameli wesibini ukuba angaphunyezwa, nangona akazange asuswe esikhundleni (iCongress yavotela ukuba impeach him, kodwa iSanate yavotela ukuba ingamsusi njengoMongameli). WayenguMongameli weDemocratic first to serve two terms since Franklin D. Roosevelt. Bambalwa bayakulibala ihlazo likaMonica Lewinsky, kodwa kuthekani malunga ne-NAFTA, isicwangciso sokunakekelwa kwezempilo esiphumelelanga kwaye "Musa ukubuza, Musa ukuthetha?" Zonke ezi, kunye nexesha lokukhula kwezoqoqosho, ziyimpawu zexesha likaClinton e-ofisi.
UGeorge W. Bush : UBush wayengunyana womongameli we-41 kunye nomzukulu weSenator yase-US. NgoSeptemba 11 ukuhlaselwa kwamaphekula kwenzeka ekuqaleni komongameli wakhe, kwaye yonke imimiselo yakhe e-ofisi yabhalwa yimfazwe e-Afghanistan nase-Iraq. Akukho mpikiswano eyaxazululwa ngexesha eliphumayo kwiofisi. Ekhaya, i-Bush ingakhunjulwa ngokuba "Akukho Mntwana Oshiya Ngumthetho" kunye nolonyulo lonyulo lwongameli emlandweni, obekufuneka lugqitywe ngokubala kwevoti, kwaye ekugqibeleni iNkundla ePhakamileyo.
UBarack Obama : Obama wayengowokuqala wase-Afrika-waseMelika ukuba akhethwe njengomongameli, kwaye kwanokuqala ukutyunjwa kuMongameli ngumbutho omkhulu. Kwiminyaka eyisibhozo ebudeni be-ofisi, iMfazwe yase-Iraq yaphela kwaye u-Osama Bin Laden wabulawa yimikhosi yase-US. Ngaphantsi komnyaka kamva kwavela ukunyuka kwe-ISIL, kwaye kunyaka olandelayo ISIL ihlanganiswe ne-ISIS ukwenza i-State Islamic. Ekhaya, iNkundla ePhakamileyo yenza isigqibo sokuqinisekisa ilungelo lokutshatyalaliswa komtshato, kwaye u-Obama wasayina uMthetho ojongene noNonophelo ongenakunqwenelekayo enzame, phakathi kwezinye iinjongo, ukubonelela ngononophelo lwempilo kubemi abangabancediyo. Ngonyaka ka-2009, u-Obama wanikezwa i-Nobel Peace Prize, ngamazwi eNkcazo esisiSeko, "... imizamo yakhe eqhelekileyo yokuqinisa ukudibanisa ngamazwe ngamazwe kunye nentsebenziswano phakathi kwabantu."
UAbraham Lincoln Ulwaphulo lokubulala
Ixesha lokugqibela likaMongameli weDemokhrasi eDityanisiweyo likhethiweyo
Udlala njani i-Craps
Funda iiNgxenye zeSilwandle kunye nendlela yokuthetha nabo
Isikhundla seRhetorical Stance
Ifunyanwa yiidemon ezintathu
I-Mythology yamaGrike Igalari yesithombe: Izithombe zeMedusa
IYunivesithi yaseAlabama eHuntsville Admissions
Ngubani Othi Ukuba Ufuna Uxolo, Lungiselela Imfazwe?
Ukucacisa ukulungelelaniswa, okanye 'Izivumelwano ezilungelelanisiweyo,' Phakathi kwamaClubs eGolf